वाह ! वीर अस्पताल
काठमाडौँ - नेपाल सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता संबेदनसिल क्षेत्रमा समेत सरकारी भनिने प्रवृत्ति हाबी छ । कतिपय सरकारी संस्थाहरुको भौतिक पक्ष र ब्यवस्थापन तथा सेवा पक्षले सरकारी संस्था हो कि होइन भन्ने अलमलमा पुर्याउछन् । तर वीर अस्पताल सरकारी अस्पताल नै हो भन्ने बुझ्न कत्ति समय पनि खर्चनु पर्दैन ।
अस्पतालको गेटबाट पस्ने बित्तिकै बस्ने कुर्सीहरुमा अँाखा पुग्यो भने जो कोहिले बुझ्न सक्छ । देशकै ठुलो अस्पताल सम्झेर पुर्व देखि पश्चिमबाट दिनहुुँ सयौं बिरामी आउने यहाँका बाहिरका कुर्सीहरु फोहोरले बस्न लायक छैनन् । पिउने पानीका धाराहरु छन् । पानी पिउन योग्य छैन ।
न्युरोलोजी लगायत संबेदनसिल वार्डहरुमा रहेका बिरामी र कुरुवाहरु ट्वाइलेटबस्न लामलागेको देख्न पाइन्छ । कोठाको कुनाकुनामा देखिने फोहोर र फोहोर सफा गर्न आउने कुचिकारहरुको झर्कोफर्को उस्तै अरुचीकर हुन्छ । हुन त नाइटिङेलले जस्तै स्काफलगाउने सिनियर नर्सहरु समेत बिरामीसंग झर्केको देख्दा ऊनीहरु पदिय दायित्वबाट च्युत भएको बोध हुन्छ ।
अस्पतालका एम्बुलेन्सहरु पनि कम रमाइला छैनन् । एम्बुलेन्सको भित्री भागले नै कुन अस्पतालको हो भन्ने चिनाउन सक्छन् । एम्बुलेन्स चालकहरु फुर्सदमा के गरेर बस्छन् त्यो अस्पताल गएपछी नै देख्न पाइन्छ । यद्यपि केहि कर्मचारी,डाक्टर र नर्सहरुको व्याबहार प्रशंसनीय छ ।
यहाँ सेमि आइसियु कक्षमै चक्का खिया लागिसकेका बेडहरु छन् । यहाँको वायरिङ पुरानो र कतै कामनदिने अवस्थाको छ । अस्पतालको फार्मेसीमा सामान्य औसधीमात्र उपलब्ध हुन्छन् । नजिकैका फार्मेसीबाट सस्तोमा औसधी दिने भन्दै बिरामीको वार्डसम्म पुग्नेहरु प्रसस्त भेटिन्छन् ।
अस्पतालभित्रै चोरीका घटनाहरु केहि दिनको बिराममा सुन्न पाइन्छन् । यहाँ भनसुन र शक्तिको उपयोगबाट बेड पाइने अपरेसनलगायतका काम छिटोहुने बिरामीका आफन्तहरुको गुनासो यथेष्ट सुन्न पाइन्छ । यहाँका चेकअप गर्ने सामानहरु बेलाबेला बिग्रेर निजि अस्पतालहरुमा सिफारिस गरिने पनि गरिएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण केहि महिना अगाडीमात्र जडान गरिएको नयाँ सिटी स्क्यान मेसिन बिग्रेकाले थुप्रै बिरामीहरुलाई थुप्रै दिन निजि अस्पतालमा पठाएको घटनालाई हेर्न सकिन्छ ।
यसका अलावा डाक्टर र कर्मचारीहरुको साना साना मुद्दामा समेत हुने आन्दोलन र यसबाट प्रभावित हुने स्वास्थ्य सेवाको अवस्था प्रभावित छ । डाक्टरहरुको आफ्नै क्लिनिक र अन्य निजि अस्पतालहरु संगको सम्बन्धले यसमा मलजल गरिरहेको छ । किनकि सरकारी अस्पतालको सुलभ र बिश्वसनिय सेवाले घाटालगाउने भनेको निजि अस्पताललाई नै हो । अत सरकारी अस्पताल कमजोर बनाएर आफ्नो स्वास्थ्य सेवामाथिको चरम ब्यापारलाई निर्भरतापुर्वक चलाउन सरकारी बोधहुने गरि चलाइएको हुनसक्ने गहिरो अनुमान गर्न सकिन्छ ।
एउटा सिमित लगानीको निजि अस्पतालले त भौतिक र ब्यवस्थापकिय हिसाबले उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न सक्छ भने हामीले कहिलेसम्म सरकारी सेवालाई कमजोर र बैकल्पिक रुपमा उपयोग गर्ने ? यो प्रश्न आजपर्यन्त ताजा छ ।
लेखक : सरोज कटुवाल, किर्तिपुर